औषधि पेन्टापराजोल (Pantoprazole) र यसको प्रयोग
फ्रेवुअरी 6, 2019 फ्रेवुअरी 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा
औषधि पेन्टापराजोल (Pantap) 40 mg को सेवन गराउदा प्रोटान पंप इन्हिबिटर पैदा हुनाले पेटमा एसिड बन्ने प्रक्रियालाई रोक्दछ । पेटमा भरिएको एसिडिटी भगाउनमा यसको राम्रो भुमिका छ । ग्यास्टिक अल्सरमा समेत यसको प्रयोगले राम्रो फाइदा गर्दछ । आजकाल पेटको सामान्य ग्यास्ट्रिकमा पेन्टापराजोल Pantoprazole (Pantap) 40 mg सेवन गर्ने चलन बढी देखिन थालेको छ ।
कहिलेकाही (Pantoprazole (Pantap) 40 mg) आफु खुसी सेवन गराउदा यसबाट हुने (Side Effects) बारे राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ । पेन्टापराजोल Pantoprazole (Pantap) 40 mg औषधिको कुनै Side Effects देखिएको छैन । तर कहिलेकाहीँ पखला लाग्ने, चक्कर लाग्ने, छाला चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने आदि समस्या देखिन सक्छ ।
यदि यस्तो लक्षण देखिएमा औषधि रोकेर डाक्टरको परामर्श लिन आवश्यक हुन सक्छ । पेन्टापराजोल Pantoprazole (Pantap) 40 mg औषधि सेवन गर्दा वा गराउदा भिटामिन B12 को कमिमा, फ्याक्चरको केसमा र रगतमा मैग्नेशियमको कमि भएमा नदिने दिएमा नोक्सान गर्न सक्छ भनेको छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट छैन भन्न सकिदैन त्यसैले औषधि सेवन गराउदा हमेसा डाक्टरको परामर्शमा औषधि सेवन गर्ने बानी बसाल्नु राम्रो हो । सेवन गर्नु पुर्ब औषधिबारे पुर्ण जानकारी भएको खण्डमा खान सकिने छ ।
सेवन गर्ने तरिका
१. खाना खानुभन्दा १ घण्टा पहिले मनतातो पानीसंग खानुपर्दछ ।
नोट : कुनै पनि औषधि सेवन गराउदा डाक्टरको रेखदेखमा वा अनुभवी व्यक्तिको रेखदेखमा सेवन गर्नु राम्रो हुनेछ ।
← क्यालसियम डोविसिलेट (डोबिक्याल) Calcium Dobesilate (Dobical) र यसको प्रयोग
वेद के हो ? धेरैलाई थाहा नभएका वेदका आधारभूत कुराहरु →
जुन 18, 2019 जुन 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
डिसेम्बर 14, 2018 डिसेम्बर 14, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1